Bobby Z 2007 – Myanmar Subtitles
Genre: Action, Crime, Thriller Director: John Herzfeld Actors: Jason Flemyng, Laurence Fishburne, Olivia Wilde, Paul Walker Country: Germany, USA Released: 20 Apr 2007 Score: 5.9 Duration: 97 min Quality: 720p BrRip H265 Years: 2007 View: 3,355
ဇာတ်ကားနာမည်လေးက Bobby Z…၂၀၀၇ ခုနှစ် ထွက်ရှိထားပြီး IMDb Rating 5.9 ရရှိထားတဲ့ Paul Walker ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေက တစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီကားမှာ ထောင်ကျနေတဲ့ Paul က နာမည် ကြီးအေးဂျင့် တစ်ခုရဲ့ ငှားရမ်းခြင်းခံရပြီးနောက် ရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီးကို လိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးရသူ Tim Kearney အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်၊ သူနဲ့ တွဲဖက်အနေနဲ့တေ့ာ နာမည်ကြီး သိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး Matrix က Oscar မင်းသားကြီး Laurence Fishburne ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ကဲ…ဘာကြောင့် ထောင်ထဲကနေတောင် ခေါ်ထုတ်ပြီး ရာဇဝတ်မှုကို ဖော်ထုတ်ရတာလဲ…အရမ်းတော်နေလို့လား..ဒါမှမဟုတ် မမြင်နိုင်တဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေရှိနေမလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်….
လျှို့ဝှက်စုံထောက်ကားတွေ၊ အက်ရှင်ကြမ်းကြမ်းတွေ ကြိုက်တယ်ဆိုသူတွေ အနေနဲ့ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အပြင် Paul ရဲ့ သရုပ်ပုံတွေကိုပါ အလွမ်းပြေကြည့်ရမှာဆိုတေ့ာ မိသားစုနဲ့ အနားယူချိန်တွေက အလကားဖြစ်သွားမှာတေ့ာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အာမခံပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
ဇာတ္ကားနာမည်လေးက Bobby Z…၂၀၀၇ ခုနွစ် ထြက်ရွိထားပြီး IMDb Rating 5.9 ရရွိထားတဲ့ Paul Walker ရဲ့ ဇာတ္ကားကောင်းတြေက တစ္ကားပျဲဖစ္ပါတယ်…
ဒီကားမွာ ထောင္က်နေတဲ့ Paul က နာမည် ကြီးအေးဂ်င့် တစ္ခုရဲ့ ငွားရမ်ျးခင်းခံရပြီးနောက် ရာဇဝတ္မှုတြေရဲ့နောက္ကြယ္က လက္မဲကြီးကို လိုက္လံရွာဖြေဖမ်းဆီးရသူ Tim Kearney အျဖစ်သရုပ်ဆောင္ထားပါတယ်၊ သူနဲ့ တြဲဖက်ေအနနဲ့တေ့ာ နာမည်ကြီး သိပ္ပံအက်ရွင္ဇာတ္ကားကြီး Matrix က Oscar မင်းသားကြီး Laurence Fishburne ကို တြေ့ရမျွာဖစ္ပါတယ်…
ကဲ…ဘာကြောင့် ထောင္ထဲကေနေတာင် ခေါ်ထုတ်ပြီး ရာဇဝတ္မှုကို ဖ္ထောုတ်ရတာလဲ…အရမ်းတော်နေလို့လား..ဒါမွမဟုတ် မျမင်နိုင္တဲ့ နောက္ကြယ္က အေကြာင်းအရာတြေက ဘာတြေရွိနေမလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင္စားစရာကောင်းတယ်နော်….
လွ်ို့ဝွက္စုံထောက္ကားတြေ၊ အက်ရွင်ကြမ်းကြမ်းတြေ ကြိုက္တယ္ဆိုသူတြေ အေနနဲ့ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ္ကားလေျးဖစ္တဲ့အျပင် Paul ရဲ့ သရုပ္ပုံတြေကိုပါ အလြမ်ျးေပကြည့်ရမွာဆိုတေ့ာ မိသားစုနဲ့ အနားယူခ်ိန်တြေက အလကာျးဖစ်ြသားမွာတေ့ာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အာမခံပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
Encoded By ZeroKyaw SooeLwin
Mega Myanmar 720P BrRip
#Bobby Z 2007 #Download Bobby Z 2007 Full Movie #Free Bobby Z 2007 Download